केपी ओली भन्दा झन् कडा बनेर निस्किइन् कोमल ओली, सार्वजनिक रुपमै यस्तो माग गरेपछि हल्लियो खुमलटार ! – Hamro Nepali Samachar
Home/ रोचक/ राजनीति/केपी ओली भन्दा झन् कडा बनेर निस्किइन् कोमल ओली, सार्वजनिक रुपमै यस्तो माग गरेपछि हल्लियो खुमलटार !
केपी ओली भन्दा झन् कडा बनेर निस्किइन् कोमल ओली, सार्वजनिक रुपमै यस्तो माग गरेपछि हल्लियो खुमलटार !
राष्ट्रिय सभा सदस्य कोमल ओली केपी ओली भन्दा झन् आक्रामक बनेर निस्किएकी छन् । उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नै झस्किनेगरी ठूलो माग गरेकी हुन् ।
वलीले ठूला भ्रष्टाचार काण्डको छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्। राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेकी सांसद ओलीले देशका ठूल्ठूला भ्रष्टाचार काण्डको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेकी हुन्।
ओलीले भ्रष्टाचारको कुरा भोट माग्ने माध्यम मात्रै बनाइएको भन्दै वाइडबडी, अरुण तेस्रो, टनकपुर, बालुवाटार प्रकरण, ओम्नी प्रकरण, आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण र क्यान्टोनमेन्टको समेत भ्रष्टाचार छानबिन गर्नुपर्ने बताइन्।
ओलीले भनिन्, ‘यहाँ भ्रष्टाचारका कुरा धेरै भए। भाषण भए। भोट माग्ने माध्यम भए। आउनुहोस् निष्पक्ष छानबिन गरौँ। वाइडबडीको छानबिन गरौँ। अरुण थर्डको छानबिन गरौँ। टनकपुरको छानबिन गरौँ। बालुवाटारको छानबिन गरौँ। ओम्नीको छानबिन गरौँ। आयल निगमको जग्गा खरिदको पनि छानबिन गरौँ। क्यान्टोनमेन्टको पनि छानबिन गरौँ। ठूला ठूला हाइड्रोको पनि छानबिन गरौँ। १६५ सांसदको समर्थन छ के को लागि हो त्यो समर्थन प्राप्त गरेको ? अरुको पार्टी फुटाएको के को लागि हो ? किन ? तथापि अर्कोतिर औँला नठड्याऔँ। सबैले सबैलाई देखेकै छ।’
सांसद ओलीले सत्ता स्वार्थ र भ्रष्टाचारका निम्ति नेपालका नदीनालाहरु बन्धक बनेको पनि बताइन्। कतिपय जलविद्युत आयोजना विदेशीको इशारामा सम्झौता भएका र अर्बाैँ भ्रष्टाचार भएको पनि उनले उल्लेख गरिन्।
ओलीले भनिन्, ‘कति जलविद्युतमा विदेशीको इशारामा सम्झौता भए होलान्। अर्बौंको डिल भयो होला। जलश्रोतको विश्वको दोस्रो धनी देशमा आजपनि व्यापार घाटामा हामीले बाहिरबाट ग्याँस ल्याएर चुल्हो बाल्दैछौँ। बिजुली दिन सकेका छैनौँ। हाम्रा नदीनालाहरु बन्धक बनेका छन्। सत्ताको स्वार्थमा र भ्रष्टाचारका निम्ति। त्यो काम गर्नलाई अहिले कसले रोकेको छ ? त्यसको लागि फेरि केपी ओलीको सरकार आउला भनी पर्खने ? जवाफ चाहियो।’
सांसद ओलीले आफूहरु प्रतिपक्षको रचनात्मक आलोचनात्मक सुझावले मुलुक अगाडि बढ्नसक्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त रहेको बताउँदै सरकारको सही कुरालाई सही र गलत कुरालाई गलत भनेर आलोचना गर्ने पनि स्पष्ट पारिन्।
सरकारले चितवन जान हेलिकप्टर नदिएपछि ओलिले चाले यस्तो कदम सबै चकित